नेपाली राजनीति : अस्थीरतामा रमाउने कि स्थीरता पचाउने ?
साउन २९, २०७५ मंगलबार
आजभन्दा दुई हजार वर्ष पहिले चीनीया दार्शनिक मेन्सियसले भने – “जब कुनै शासक जनतालाई घाँस र धुलोको रुपमा व्यवहार गर्दछ, त्यस बेला जनताले त्यस शासकलाई लुटेरा र शत्रुको रुपमा व्यवहार गर्नु पर्दछ ।” नेपालमा १९९७ साल पछि मात्र शासक कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा जनताको तहमा संगठित रुपमा बहस सुरु भएको देखिन्छ । त्यस अघिका तमाम राणा शासक र एकीकरण पश्चात् शाही शासकहरुले जनतालाई मेन्सियसले भने झैं घाँस र धुलोकै रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । २००७ सालको परिवर्तन पछि आफ्नो शासक आफैं छान्ने संगठित प्रयास भए पनि सारभूत रुपमा त्यसो हुन सकेन । २०१५ सालमा भएको आम चुनावलाई २०१७ सालमा कू गरिए पश्चात् शासक र जनताको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन ।
जनइच्छा र नेपालको माटो सुहाउँदो शासन व्यवस्था भनिए पनि पञ्चायती व्यवस्थाले जनताको इच्छा पूरा गर्नुको सट्टा देशमा विद्यमान् सामन्ती व्यवस्थाको पहरेदारी गर्नु बाहेक केही गर्न सकेन । जनताको व्यापक दवाव पश्चात घोषणा गरिएको २०३६ सालको जनमत संग्रह विभिन्न तिकडम र धाँधलीले जनइच्छा भन्दा विपरीत सम्पन्न भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनले सीमित प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर प्रदान गरे पनि त्यस पछि उदाएका नेताहरुले जनताको इच्छालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको स्थिति रहेन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएका विभिन्न सरकारहरुले देशको बहुसंख्यक जनसमुदायको इच्छा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि विगतका सामन्तहरु, नवोदित पूँजीपतिहरु र विदेशी पूँजीको संरक्षणमै अधिकांश समय खर्च गर्यो । राज्यसत्तामा भएको सामान्य परिवर्तनले जनताको दयनीय अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन ।
नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन शासन संग कुनै साइनो जोड्न नसकेका जनताले स्वभाविक रुपमा विद्रोहको बाटो समात्न पुगे, र राजा महेन्द्रको कदमको पुनरावृत्ति गर्ने मनसायले आएको राजा ज्ञानेन्द्रको कदम पश्चात् जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सडक आन्दोलन गरिरहेका संसदवादी दलहरुलाई बाह्र बँुदे ऐतिहासिक सहमतिमा पुर्याइदियो । बाह्र बुँदे समझदारीले नेता इच्छा र जनइच्छाको राम्रो तालमेल निर्माण गरेकै कारण छोटो अवधिमा तुमुलकारी आन्दोलनको सिर्जना हुन पुग्यो र राज्यको उपरि संरचनाामा मात्र सीमित रहेको सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्य गरिदियो । आन्दोलनमा संगै हिंडेका वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरु आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सार्थक सहकार्य गर्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतालाई धेरै पछिमात्र बोध गरे । परिणामस्वरुप, ऐतिहासिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने अग्रगामी संविधान निर्माण संभव भयो ।
२०६२। ६३ को जनक्रान्तिले निर्माण गरेको संविधान सभामा जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई सबैभन्दा ठूलो हैसियत मात्र प्राप्त थिएन, वामपन्थी शक्तिको ६२ प्रतिशत भन्दा बढी हैसियत कायम थियो । उनीहरुको बीचमा अहिलेको जस्तो एकता हुन सकेको भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण सत्ता प्राप्त गर्न सक्दथे । अहिलेको भन्दा अग्रगामी संविधान बन्न सक्थ्यो । दुर्भाग्यवश त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसको सत्ता नछोड्ने तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा वामपन्थीहरुलाई सरकार छोड्ने रणनीति बुझ्न सकिएन । यहाँ जनइच्छा र नेताइच्छाको तालमेल हुन सकेन । हिन्दू शास्त्रमा सुन्द र उपसुन्दको एउटा रमाइलो प्रसंग छ ः सुन्द र उपसुन्दले कठोर तपस्या मार्फत यस्तो शक्ति प्राप्त गर्दछन् कि ती दाजुभाइ मिले सम्म तीन त्रिलोक चौध भुवनको कुनै पनि तागतले तिनीहरुलाई हराउन सक्दैन । अन्त्यमा एउटा जुक्ति निकालिन्छ ।
त्यस बेलाकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी तिलोत्तमा अत्यन्त सुन्दर पहिरन र मुद्रामा सुन्द र उपसुन्दको सामुन्ने उभ्याइन्छिन् । तिलोत्तमालाई कसले पहिले भोग गर्ने भन्ने विषयमा सुन्द र उपसुन्दको भयंकर झगडा हुन्छ र आपसमा काटामार गरेर तिनीहरुको इहलीला समाप्त हुन्छ । ठीक त्यसरी नै क्रान्तिविरोधी तत्वले नेपालका वामपन्थी पार्टीहरुलाई कमजोर बनाउन विभाजित बनाएर आफू सत्तामा टिकिरहने रणनिित बनायो । देशको आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व गर्न बल्ल अहिले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन एकीकृत भएको छ । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई समाजवादमा पुग्ने मूलबाटो बनाएपछि आवधिक चुनावको सर्वाधिक महतव हुने नै भयो । चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने पार्टी वा नेताले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने जनइच्छाको राम्रो विश्लेषण गर्न सक्ने र सोही मुताबिक चल्न सक्ने पार्टी वा नेता मात्र राजनीतिक मैदानमा लामो समयसम्म टिक्न सक्दछ ।
चुनावमा हुने फैसला स्वतन्त्र मतदाताले चुनावी माहोलको अन्त्यतिर जस्तो धारणा निर्माण गर्दछन्, त्यसैबाट हुने गर्दछ । यस अर्थमा आम जनताको भावना सही ढंगले बुझ्न सक्ने पार्टी वा नेताले मात्र सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ । तीन सय चौसट्ठी दिन जनताको मतलब नगर्ने, उनीहरुको पीर मर्का बुझ्ने प्रयत्न नगर्ने र समस्या समाधानको लागि सत्ता वा सत्ता बाहिर रहँदा समेत सार्थक पहल कदमी गर्न नसक्ने नेतृत्व निसन्देह जनताबाट अलग थलग बन्दछ र इतिहासको गर्भमा बिलाउँदछ । त्यस्तो पार्टी वा नेतालाई तीन सया पैसट्ठीऔं दिनमा जनतासंग भोट माग्न जाने कुनै नैतिक अधिकार बाँकी रहँदैन । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुको विजय र पराजयको लुकामारी त्यही कारणले भइरहेछ । जसरी विजय क्षणभंगुर छ, त्यसरी नै पराजय अस्थायी छ । यो तथ्यलाई बुझेर सार्थक पहल गर्ने नेतृत्व आगामी समाजवादी आन्दोलनलाई चाहिएको छ । विगतमा देशभित्रको सामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्रसंग प्रमुख लडाईं थियो भने आगामी लडाईं उदारवादी–साम्राज्यवादी शक्तिसंग हुने भएकोले सोही अनुरुपको तयारी आवश्यक छ ।
आगामी केही दशकसम्म आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व नगरी नेपालको वामपन्थी शक्तिले समाजवादी बाटोको चित्र कोर्न सक्दैन । जनसरोकारका अनगिन्ती विषयहरुको सम्बोधन, जनस्तरमा हुने आलोचनाहरुको लेखाजोखा र जनता केन्द्रित संगठनात्मक अभियानमार्फत मात्र जनइच्छा र नेताइच्छाको समुचित तालमेत हुन सक्दछ । युद्ध सञ्चालन गरेर आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीसंग जनपरिचालनका अनुभव कम छन् भने जनपरिचालनको अनुभव भएका वाम पार्टीहरुसंग जनविद्रोह र बल प्रयोगको अनुभव कम छ । समाजवादी आन्दोलनको तयारी गर्ने चरणको बहस गरिरहँदा यी विषय वस्तुहरुको समेत समुचित आंकलन गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । जनइच्छा र नेताइच्छाको उच्चतम तालमेलले मात्र मुलुकले ऐतिहासिक फड्को मार्न सक्छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले संघर्षको लामो ईतिहासमा अहिलेको पैमानाको सफलता यस अघि कहिल्यै प्राप्त गरेका थिएनन् । यो महान उपलब्धिलाई आगामी ठूल्ठूला उपलब्घि प्राप्तिको लागि कोसेढुङ्गा बनाउन सबैले उत्तिकै चनाखो हनुपर्ने आवश्यकता छ । सबभन्दा बढी त सरकार र नेकपाको केन्द्रिय नेतृत्वको गम्भिरता र जिम्वेवारी बोध अपेक्षित छ । उपलब्धि प्राप्त गर्नु जति कठिन थियो, त्यसलाई जोगाउन त्यति नै चुनौतिपूर्ण छ । सत्ता बाहिर हुँदा जनतालाई दिएका आश्वासनहरु सत्तामा हुँदा तिनीहरुको कार्यान्वयन भएको जनता हेर्न चाहन्छन् । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी नै ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन हो । यसबाट सरकार बरालिए जनताका समृद्धिको सपना पनि बरालिने निस्चित छ । मेन्सियसले भनेझैं जनतालाई घाँस र धुलोको रुपमा होईन, देश निर्माणको सबभन्दा महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा लिएर सरकार अगाडि बढेको खण्डमा ढिलोचाँडो सबै समस्याको समाधान निस्किन्छ ।
पार्टीको सपूर्ण सांगठानिक एकीकरण,पार्टीको आगामी कार्यनीतिको तय,सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, प्रतिपक्षको अवरोध निस्तेज पार्ने रणनीति र आर्थिक समृद्धिको अल्पकालीन र दीर्घकालीन खाका बनाउन भर्खरै एकीकृत भएको नेकपालाई केही समय अवश्य लाग्ने छ । सचेत जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको यो अवस्था नबुझेका पनि छैनन् । तर, काममा ढीलासुस्ती भएमा, जनतालाई दिएका आश्वासनमाथि चिसो पानी खनिएमा अहिलेको कयुनिष्ट वर्चश्वको भविश्य सधैं कमलको फूलको ओछ्यानमा सुत्न भने पाउने छैन । अस्थीरतामा रमाउन अभ्यस्थ नेपाली राजनीतिले स्थीरता पचाउन केही समय लिन्छ । र, त्यही अवधिभित्र पार्टी र सरकारले अग्रगतिको आफ्नो आधार तयार गरिसक्नु पर्दछ । सरकारप्रति जनतालाई आशावादी बनाईराख्न, अस्थीरता निम्त्याएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने बानी परेकालाई किनारा लगाउन पनि नेकपा र उसको सरकार अझै सशक्त बन्न आवश्यक छ ।
साउन ३०, २०७५ बुधबार
निम्न काम गर्दा यी बार सफलता पाउन सकिन्छ, जान्नुहोस् !
संयुक्त तीज धमाका-२०१८ का लागि नेपालबाट रोज,खुमन र रमिला युएई आउँदै
दीप‍िका-रणवीरको बिहेको मिति तय, ३० जनालाई मात्र निम्त
मुलुकको शान्तिसुरक्षा खलबलाउन खोज्ने जोकोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याईनेछ : गृहमन्त्री थापा
स्थानीय तहले आफू खुशी मनलाग्दी लगाएको करको संसदमा चर्को विरोध